गरुडामा डेंगुले महामारीको रूप लिंदै - Prateek Daily
प्रस, गरुडा, २४ कात्तिक/
दर्जनभन्दा बढी निजी तथा सामुदायिक अस्पताल र सामुदायिक स्वास्थ्य संस्था रहेको गरुडामा डेंगु ज्वरोले महामारीको रूप लिएको देखिएको छ । गरुडा र शिवनगरको दुई अस्पतालमा गत दुई हप्तामा करीब चार दर्जन व्यक्तिले डेंगुको उपचार गराएका छन् ।
हरेक दिन डेंगुका नयाँ बिरामी अस्पतालमा आइरहेको गरुडामा रहेको अनामिका अस्पताल प्रा. लि.का प्रमुख डा. आरबी प्रसाद बताउँछन् । गत दुई हप्तामा ३५ जनाले उपचार गराइसकेको डा. प्रसादको भनाइ छ ।
अस्पतालमा अन्य बिरामीलाई डेंगु नसरोस् भनेर अन्य वैकल्पिक व्यवस्था गरिए पनि झुलमा राखेर डेंगु रोगीको उपचार गरिएको डा. आरबी प्रसादले जनाएका छन् । डेंगु अचम्म किसिमले पैmलिएको बताउँदै डा. आरबी प्रसादले तत्काल नियन्त्रण नगरिए गम्भीर सङ्कट देखा पर्ने अवस्था आएको पनि उनले बताएका छन्।
यसैगरी, गरुडा नपाको शिवनगरमा रहेको सञ्जीवनी क्लिनिकमा दुई हप्तामा १० जनाभन्दा बढीको डेंगुको उपचार गराइसकेको डा. सञ्जीवकुमार यादवले बताएका छन् । नपाकी उपमेयर रङ्गीलादेवी जयसवालमा पनि डेंगुको सङ्क्रमण देखिएपछि काठमाडौं रेफर गरेर उपचार गराएको जानकारी डा. यादवले दिएका छन् ।
डेंगु ज्वरोको भरपर्दो उपचार समयमैं भएमा निको भइरहेको दुवै चिकित्सकले बताएका छन् । अनामिकाले अहिलेसम्म छजनालाई र सञ्जीवनीले तीनजनालाई रेफर गरेको जानकारी दिएका छन् ।
गरुडामा रहेका अन्य अस्पतालमा पनि डेंगुका रोगीले उपचार गराएको हुन सक्ने देखिन्छ । दुई/चार दिन घरमा ज्वरोको उपचार गराउने गरेको र वीरगंज, हेटौंडा, भरतपुर तथा काठमाडौंसम्म उपचारका लागि जाने गरेको देखिएको छ ।
अनामिका अस्पतालमा उपचार गराइरहेका गरुडा–४ का हृदयनारायण कुशवाहाले आप्mनो टोलामा घरघरै डेंगुको लक्षण देखिने ज्वरो पैmलिएको बताएका छन् । घरमैं उपचार गराउनेहरूको सङ्ख्या पनि दर्जनौंको हाराहारीमा रहेको कुशवाहाले बताएका छन् ।
कटहरिया नगरपालिकाको डुमरिया टोलमा पनि तीनजनामा डेंगुको सङ्क्रमण देखिएको डा. सञ्जीवकुमार यादवले जानकारी गराएका छन् । मध्यरौतहटको गढीमाई नगरपालिकामा डेंगु रोगको सङ्क्रमण अहिलेसम्म नदेखिएको आपूmलाई जानकारी नरहेको मेयर श्यामप्रसाद यादवले बताएका छन् ।
गरुडा नगरपालिकामा डेंगुको सङ्क्रमण अत्यधिक बढेकोमा आपूm गम्भीर रहेको र केही दिनमैं डेंगुविरुद्धको औषधि छर्ने तयारी भइरहेको गरुडा नगरपालिकाकी उपमेयर रङ्गीलादेवी जयसवालले बताएकी छन् । औषधि छर्ने आन्तरिक तयारी भइरहेको उपमेयर जयसवालको भनाइ छ ।